Yurub oo doonaysa wadahadl dhex mara Qadaafi iyo Mucaaradka iyo Maraykanka oo ku dhagan in Qadaafi uu xilka ka dego. – SBC
Yurub oo doonaysa wadahadl dhex mara Qadaafi iyo Mucaaradka iyo Maraykanka oo ku dhagan in Qadaafi uu xilka ka dego.
Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay in ay tahay dacaayad raqiiis ah wararka sheegaya in Aanu qadaafi ka tagayn xilka,iyadoona taa badalkeeda sheegtay in ay dhow dahay wakhtigii uu booska banyn lahaa Korneel Muacamar Al qadaafi Madaxweynaha Liibiya.
Wasiirada arimaha Dibada Maraykanka Hillary Clinton ayaa sheegtay shacabka Liibiya in ay yihiin kuwo leh qaraarka ugu dambeeya ee dalkooda,ayna dhinacooda la garab taagan yihiin in Nidaamkaasi Rajiimka ah ay booska ka saaraan.
Mowqifka ay Dowlada Maraykanku kasoo bandhigtay xaalada Liibiya ayaa ahaa mid jawaab u ah hadal kasoo yeeray Wasiirka difaaca Faransiiska oo ahaa in wadahadal uu u furmo Mucaaradka iyo weliba dowlada Liibiya.
Wasiirka Difaaca Faransiiska Gerard Ongeh oo ka hadlay Taleefishinka ayaa sheegay in ay tahay xiligan wakhti ay wada hadli karaan Mucaaradka iyo dowlada Liibiya,aana la sugu Karin ilaa ay Kooxaha Mucaaradka ka jabinayaan Ciidamada Korneel Qadaafi.
Maraykanku waxaa uu sheegay in uu aamin sanyahay in Nidaamka Qadaafi uu meesha ka baxayo,ayna kala kaashan doonaan Xulafadooda Nato sidii loosii wadi lahaa duqaynada si ay u la ciifto Awooda Milatari ee Ciidanka Qadaafi.